२ वर्षकी बालिकाले ५ जनालाई नयाँ जीवन दिएर मृ’त्युवरण गरिन् । – Patrika Nepal
२ वर्षकी बालिकाले ५ जनालाई नयाँ जीवन दिएर मृ’त्युवरण गरिन् ।
मंग्सिर २२, २०७८ बुधबार 65
कम्तीमा हामी’लाई यो कु’राको सन्तुष्टि त हुन्छ कि हाम्री छोरी अब उनीहरुमा जीवित छिन् ।’सर गंगाराम अस्पता’लका अध्यक्ष डा. डीएस राणाले भने ‘मस्तिष्कबाहेक धनिष्ठाका सबै अंगले राम्रो’सँग काम गरिरहेका थिए । माता’पिताको मन्जुरी’पछि उनको मुटु, मृगौला, कलेजो र दुवै कर्निया अस्पतालमै प्रिजर्भ गरिएका थिए ।
उनका दुवै मृ’गौला एकजना वयस्क’लाई, मुटु र कलेजो दुई अलग अलग बच्चाहरुलाई दिइयो । कर्नियालाई अझै पनि सुरक्षि’त राखिएको छ जो दुई जनालाई दिइनेछ । यसरी धनिष्ठाले ५ जनालाई नयाँ जी’वन दिएकी छिन् ।’
Prevदिदी भिनाजुको बिचमा सु’तेकी सालीको भयो यस्तो हाल
Nextनेपालमा कडा लकडाउन गर्ने निर्णय: औषधि बाहेक अन्य सबै पसल बन्द! (कति गतेबाट ? हेर्नुहोस)